Nhau - Furuwenza kana COVID-19? Yedu multiplex PCR yekuona kit inogona kukubatsira kusiyanisa
Furuwenza kana COVID-19? Yedu multiplex PCR yekuona kit inogona kukubatsira kusiyanisa
Zviratidzo zve COVID-19 uye furuwenza zvakafanana, saka kuzivikanwa chaiko kunodiwa
Kubva Zvita 2019, iyo nyowani coronavirus (2019-nCoV / SARA-CoV-2) yanga ichipararira munyika. Ikozvino kuona uye kuongororwa kwehutachiona hwevanhu kana vatakuri kwakakosha kukosha uye kukosha kwehosha yekudzivirira. Uye zvakare, iyo iriko nguva ndeye yakakwira kuitika kweakasiyana furuwenza A hutachiona 、 furuwenza B utachiona uye zvimwe zvine hukama hutachiona hutachiona. Zviratidzo zvekuratidzira kweiyo nyowani coronavirus hutachiona uye zviratidzo zvekutanga zvehutachiona hutachiona hutachiona zvakafanana. "Chinese National Influenza Prevention and Control Work Plan (2020 Edition)" yakaratidza zvakajeka kuti kunyatsoongorora-kuongorora uye kutsvagisa, uye kukurudzira kubatana kwekuonekwa kwehutachiona hwakawanda hwehutachiona hwehutachiona hwehutachiona, kutsigira panguva imwe chete kuona kweutachiona hwakawanda kunyanya kusiyanisa kwehutachiona hutsva. coronavirus uye furuwenza A / B hutachiona. .
COVID-19 + Flu A / B PCR yekuona kit yakatangwa naCHK Biotech
Mazuva ano, kucherechedzwa kukuru kwabhadharwa kuongororwa kwevamwe vatachiona vekutadza kufema kunze kweiyo coronavirus nyowani. Nekudaro, izvo zviratidzo zvinokonzerwa nefuruwenza A / B hutachiona zvakafanana nezviratidzo zvekiriniki zveiyo nyowani coronavirus. Mukuita kwekusimbisa varwere vane nyowani coronavirus mabayo kana vanofungidzirwa varwere, zvakafanira kuti uongorore mukana wehumwe hutachiona (kunyanya furuwenza A nefuruwenza B) kuti uite kurongeka kwakaringana kwekiriniki, kuzviparadzanisa uye kurapwa munguva, inova dambudziko rakakura kuti rigadziriswe muchipatara chokwadi. Naizvozvo, CHK Biotech yakagadzira iyo COVID-19 / AB multiplex yekutsvaga kit kugadzirisa dambudziko iri. Iyo kitsi inotora iyo chaiyo nguva PCR nzira yekuona iwo matatu mavhairasi ekuongorora uye kusiyanisa iyo COVID-19 varwere uye furuwenza varwere, uye inogona kutamba chinzvimbo chakakosha mukudzivirira uye kutonga kwe COVID-19.
Zvakanakira ichi chigadzirwa: kukwirira kwekunzwa; panguva imwe chete kuona kweane zvinangwa, kufukidza nyowani coronavirus, furuwenza A, furuwenza B, uye yemukati yekudzora jeni seyakagadziriswa mhando mukati meyese nzira yekuyedza, iyo inogona kunyatso dzivirira mhedzisiro yakaipa mhedzisiro; kukurumidza uye kwakaringana kuona: Zvinongotora 1 awa uye maminetsi makumi matatu kubva kumuenzaniso wekuunganidza kuti zvibude.
Amplification munyonga itsva coronavirus/furuwenza A / B matatu akabatanidzwa ekuona reagent
Iyo nyowani coronavirus denda ichiri mune yakakosha nhanho yekudzivirira uye kutonga. Tatarisana nekuchinja kwezvinhu, Nzira dzedu dzekudzivirira uye dzekudzora, nzira dzekutsvaga, uye nzira dzekuongorora dzinoenderera mberi nekuisa kumberi zvinodiwa.CHK Biotech inyanzvi yehupenyu uye yakagara yakashinga kutora zvemagariro. Isu tave tichigara tichikunda hunyanzvi hwekunetseka uye tichiramba tichigadzira zvigadzirwa zvitsva zvine chekuita nekuonekwa kweye new coronavirus virus.
Tinonzwisisa kuti chete nehushingi hwekuita isu tinokwanisa kuramba tichikura; chete nekuenderera mberi kwekuvandudza tinogona kukunda ramangwana. Panguva ipi neipi, CHK Biotech inoshandisa "hunyanzvi" uye "hunyanzvi" kupuruzira zvigadzirwa zvayo uye kushandira iyo Hupenyu sainzi, diagnostics minda.